48MP quad cameras ၊ 5,000mAh battery နဲ့ Snapdragon 665 SoC ပါ၀င်ထားတဲ့ Realme 5s ထွက်ရှိလာ - PX
Realme အနေနဲ့ လူအများစောင့်မျှော်နေတဲ့ Realme X2 Pro Flagship ဖုန်းအပြင် Realme 5s ကိုပါ မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ ဖုန်းရဲ့ အဓိက Feature ကတော့ ဈေးသက်သာတဲ့အထဲမှာ 48-megapixel quad camera experience ကိုပေးလာနိုင်တဲ့ အပြင် ပမာဏများတဲ့ battery ပါ၀င်ထားပါတယ်။ Realme 5s ကို India မှာ ဈေး Rs. 9,999 (~$139) မြန်မာငွေ ၂ သိန်း ၁ သောင်းကျော်နဲ့ စတင်၀ယ်ယူလို့ရနေပါပြီ။
Realme 5s ဟာ mid-range ဖုန်းဖြစ်နေသော်လည်း ဖုန်းမှာ Nano holographic color ပါတဲ Crystal design အသစ်ကိုသုံးပေးထားတဲ့အတွက် ဘယ်ရှုထောင့်ကနေပဲ ကြည့်ကြည့်တောက်ပနေမှာပါ။ ဖုန်းမှာ waterdrop notch ပါတဲ့ 6.51-inch IPS LCD display ကိုတပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ ထို Display ဟာ 720 x 1600 pixels HD+ resolution ကိုပေးထာပြီး aspect ratio 20:9 ရှိပါတယ်။ ဖုန်းကို Gorilla Glass ကိုယ်ထည်နဲ့ ကာကွယ်ပေးထားပါတယ်။ Screen-to-body ratio ကတော့ 89% ရှိတယ်လို့ ပြောထားပါတယ်။ 4GB RAM နဲ့အတူ 11nm Snapdragon 665 AIE mobile platform နဲ့ ဖုန်းကို အားဖြည့်ပေးထားပြီး အမြင့်ဆုံး Internal Memory ဟာ 128 GB ထိပဲရှိပါတယ်။ Additional storage အတွက် microSD card slot တစ်ခုပါ၀င်ထားပါသေးတယ်။
ဖုန်းရဲ့ နောက်ဘက်မှာတော့ Quad camera system ကိုတပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ ထို Camera System ထဲမှာ 48-megapixel Samsung GM1 lens ကို main lens အနေနဲ့ထည့်ပေးထားပြီး 119-degree 8-megapixel wide-angle lens ၊ 2-megapixel portrait camera နဲ့ 4cm focal length ပါတဲ့ 2-megapixel macro lens တို့နဲ့ တွဲပေးထားပါတယ်။ ဖုန်းရဲ့ ရှေ့ဘက်မှာတော့ f/2.0 aperture ပါတဲ့ 13-megapixel lens ရှိတဲ့ Selfie Camera ပါ၀င်ပါတယ်။ Front Camera မှာ 4-in-1 pixel binning technology ပါ၀င်တဲ့အတွက် low-light အခြေအနေမှာ အထင်ကြီးစရာ Selfies တွေကို ရိုက်နိုင်မှာပါ။ Photography မှာ AI scene recognition ၊ Chroma Boost ၊ Super nightscape ၊ bokeh mode ၊ AI HDR ၊ AI beauty ၊ EIS ၊ 240fps slow-motion Video recording နဲ့ 30fps 4K video recording စတဲ့ Features တွေပါ၀င်ထားပါတယ်။
Realme 5s မှာကြီးမားတဲ့ 5,000mAh battery ပါ၀င်ထားပြီး 10W charging ကို ထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။ Battery ဟာ Standby 30days ၊ Camera usage 48.9 hours ၊ Music playback 30.8 hours နဲ့ YouTube usage 19.1 hours ထိရပါတယ်။ ColorOS6နဲ့ Android9Pie OS ကို ဖုန်းမှာ run ပေးထားပါတယ်။ ဖုန်းရဲ့ Connectivity မှာတော့ ထုံးစံအတိုင်း Dual SIM support ၊ 4G VoLTE ၊ Bluetooth 5.0 ၊ GPS ၊ microUSB 2.0 နဲ့ 3.5mm audio jack စတဲ့ Features တွေပါ၀င်ပါတယ်။ Fingerprint scanner ကိုတော့ Realme 5s ရဲ့နောက်ဘက်မှာတွေ့ရမှာပါ။ Realme 5s ဟာ အခြေခံအားဖြင့် Realme5နဲ့တူပါတယ်။ ပြောင်းလဲလာတာဆိုလို့ Quad camera system ထဲက primary lens ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Realme 5s ရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကို အောက်မှာဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
4 GB RAM + 64 GB storage – Rs. 9,999 (~$139) မြန်မာ‌ငွေ ၂ သိန်း ၁ သောင်းကျော်
4 GB RAM + 128 GB storage – Rs. 10,999 (~$153) မြန်မာ‌ငွေ ၂ သိန်း ၃ သောင်းကျော်
အရောင်တွေမှာတော့ Crystal Blue ၊ Crystal Purple နဲ့ Crystal Red ဆိုပြီးရှိပါတယ်။ Realme 5s ကို Flipkart နဲ့ Realme India’s online store ကနေတစ်ဆင့်၀ယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ထွက်ရှိပြီးသား Realme5ကိုလည်း Realme 5s နဲ့အတူ ဆက်ပြီးရောင်းချပေးလာမှာပါ။ ဖုန်းရဲ့ ပထမဆုံး Sale ဟာ Nov. 29 မှာကျင်းပလာမှာပါ။ Offline stores တွေမှာတော့ မကြာခင်မှာ စတင်ရောင်းချလာတော့မှာပါ။